गभर्नर महाप्रसाद निलम्वित, निमित्त गभर्नरमा ढुंगाना
काठमाडौँ – सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अधिकारीलाई निलम्बन गरेसँगै डेपुटी गभर्नर नीलम ढुङ्गानालाई निमित्त गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको छ ।
त्यही टोलीको गृहकार्यपछि गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्य समिति बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन र त्यसको सिफारिस अनिवार्य हुने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्थाअनुसार बनेको समितिमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन् र समितिलाई एक महिनाभित्र छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । जाँचबुझ समिति बने लगतै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
को हुन् निमित्त गभर्नर ढुंगाना ?
ढुंगाना २०५४ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेकी हुन्। सहायक निर्देशक पदबाट प्रवेश गरेकी उनी डेपुटी गभर्नर हुनुअघि कार्यकारी निर्देशक थिइन्। उनी अहिलेसम्म कुनै पनि परीक्षामा असफल नभएको बताउँछिन्।
‘पहिलो पटक नै परीक्षामा उत्तीर्ण भएर राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछिका सबै परीक्षामा एकै पटकमा पास हुँदै आएकी छु। मैले २०५४ सालदेखि असफल हुनु परेको छैन।’
पहिलो महिला डेपुटी गभर्नर ढुंगाना भन्छिन्ः परीक्षादेखि राजनीतिक नियुक्तिसम्म कतै पछि परिनँ
हालसम्म उनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी थिइन्। राष्ट्र बैंकमा १७ जना कार्यकारी निर्देशक थिए।
देवकुमार ढकाल र गुणाकर भट्टपछि उनी तेस्रो वरीयतामा थिइन्।
कार्यकारी निर्देशकभन्दा माथि डेपुटी गभर्नर र गभर्नर रहन्छन्। यी दुई पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ। यो प्रतिस्पर्धा जितेकी उनले अहिले गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी हुन्।
हरेक परीक्षामा अब्बल रहँदै आएकी ढुंगाना राजनीतिक नियुक्तिमा पनि अगाडि देखिन पुगिन्।
‘यसमा पनि म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। कुनै परीक्षा र आफ्नो योग्यता जाँच हुँदा पछि परेकी थिइनँ। अहिले राजनीतिक नियुक्तिमा पनि परेकी छु,’ उनले खुसी हुँदै भनिन्।
ढुंगानाको जन्म २०२५ सालमा झापामा भएको हो। स्कुले शिक्षापछि उनले कमर्स अध्ययन गरिन्। पढाईमा तेज उनले दमक क्याम्पसमा आईकम टप गरेकी थिइन्।​
आईकमपछि विवाह गरेकी उनले पढाइलाई निरन्तरता दिइन्। स्नातकोत्तरमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा महिलातर्फ स्वर्ण पदक जितेकी छन्। त्यसपछि केही समय उनी अध्यापनमा लागेकी थिइन्।